काठमाडौँ, १७ कात्तिक चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी सोमबारदेखि अनशन बस्ने भएका छन्। चिकित्सा शिक्षाभित्र देखिएको विकृति अन्त्य गर्न सरकार उदासीन देखिएको भन्दै डा. केसी अनशन बस्न लागेका हुन्। यसअघि..
काठमाडौँ, २० जेठ श्रीमानः म मरे भने के तिमी दोस्रो विहे गर्छौ ? श्रीमतीः छि..के भन्नु भको त्यस्तो ? म त मेरो बहिनी सित बस्छु । अनि हजुर ? श्रीमानः म पनि तिम्रै बहिनी..
काठमाडौँ, १९ जेठ शेरे –अरु के चलिरहेको छ लाइफ मा ? धुर्मुसे -3ifWba|XzjHjaAb। शेरे – केही समझमा आइरहेको छैन ? धुर्मुसे –यही चलिरहेको छ,भन्या के।..
काठमाडौँ, १७ जेठ शेरेले एउटी केटीलाई धेरै माया गर्थ्यो तर डराएर केही भन्न सकेको थिएन । 1 दिन उसले म्यासेजमा I love u लेखेर पठाउने निर्णय गरेछ । उसले राती ‘I LOVE U’..
काठमाडौँ, १७ जेठ केटा केटीलाई सोध्दै : तिमी केटीहरु बिहे भएर जाँदा किन रुन्छौ ? केटी : अनि के त …. आफ्नो घर बाट लगेर तलाई अर्काको घरमा भाडा माझ्न, लुगा धुन,..
काठमाडौँ, १५ जेठ शेरे: साहुजी त्यो के हो ? साहुजि: त्यो थर्मस हो । यसमा तातो चिज राखे तातै रहन्छ , चिसो चिज राखे चिसै रहन्छ । शेरे: त्यसो भए एउटा दिनु न त..
एक घरमा श्रीमतीले श्रीमान कुटेको भन्ने खबर पाएपछि प्रहरीको टोली श्रीमतीलाई पक्राउ गर्न भनेर गएछ । उक्त घरमा पुगेपछि इन्स्पेक्टरले हवलदारलाई उक्त महिलालाई नियन्त्रणमा लिएर बाहिर ल्याउने आदेश दिएछ । हवलदार..
हाकु फिल्म हेरेर बाहिर निस्किदै थियो एक्कासी एउटा भिखारी हात फैलाउँदै पैसा माग्न थालेछ .. भिखारी : भागवानको नाममा केइ दिनुस हजुर्… २ दिन देखी केहि खान पाको छैन हाकुले १०० को..
एउटा टुरिस्ट नेपाल भ्रमण गर्न आएछ, उसले एउटा नेपाली गाईड राखेछ र uniharuघुम्न गएछ। उनिहरु घण्टाघर नजिक पुगेपछि टुरिस्टले गाईडलाई सोधेछ "यो घण्टाघर बनाउन कती समय लाग्यो ?" गाईड : ५..
एउटा बाख्रीले बाख्रोलाई भनीछ : ‘आइ लभ यु’ बाख्रो : निकै ढिला गर्यौ प्रिय । अब त दशै आइसक्यो ।..
शेरे : ल हेर ! मेरी प्रमिकाले मलाई पठाएको लवलेटर । जिरे : तर, यो त पुरै खाली छ त ! शेरे : आजकल हाम्रो बोलचाल बन्द छ के ।..
नमस्कार ! नेपाल टेलिकममा स्वागत छ । कृपया सम्बन्धको लागि १ थिच्नुहोस्, स्वयंबरको लागि २ थिच्नुहोस् । र विवाह नै गर्नका लागि ३ थिच्नुहोस् । धन्यवाद ! मोहन : दोश्रो विवाहको..
रामु तिम्रा कति जना बच्चा छन ? राजु १८ जना छन् । रामु ओहो ! यति धेरै बच्चा ? किन नि ? राजु मैले विहे गर्ने बेलामा ससुरालाई बचन दिएको थिएँ की –..
सैनिक परेडको बेलामा अफिसरले सिपाहीसँग सोधेछ– अफिसर : रामबहादुर यो तिमीले हातमा लिएको के हो ? रामबहादुर : बन्दुक हो शर । अफिसर : यो बन्दुक होइन रामबहादुर । यो त तिम्रो इज्जत,..
भिखारी साहेब ! एक रुपैयाँ दिनुस् न । साहेब तिमिलाई लाज लाग्दैन, यसरी सडकमा बसेर भिख माग्नलाई ? भिखारी अनि के तेरो १ रुपैयाँ पाउनका लागि म अफिस खोलेर बसौं त..
बैक लुटिसकेपछि लुटेराहरुले बैंकको क्यासियरलाई पनि आफ्रूहरुसँगै लैजान खोजेछन् । क्यासियर : बैंक त लुटिसक्यो, अब मलाई किन साथै लैजान खोजेको ? लुटेराहरु : अब यत्रो पैसा तेरो बाउले गन्छ त ? ..
लोग्ने : तिमीसँग विहे गरेर मलाई एकदम फाइदा भएको छ । श्रीमती : खुशी हुँदै – होर ! कसरी नि ? लोग्ने :मलाई मैले गरेको पापको सजाय म जिउँदो हुँदै पाइरहेकोले नि त..